काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएपछि बिहीबार डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन जारी राख्ने बताएका छन् । २३ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीलाई भेट्न पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहदुर देउवाले ‘ज्यान जोखिममा नपार्न’ अनशन तोड्न आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा डा. केसीले अनशन जारी राख्ने बताएका थिए । यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि सरकारले संवाद गर्नुको साटो उल्टै सत्तारुढ दलका कार्यकर्तालाई अनशनविरुद्ध प्रदर्शनमा उतारेपछि दिग्दारिएका डा. केसीले सहयोगीहरुलाई पनि अनशन जारी राख्ने बताएका छन् ।
सरकारले भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएसँगै डा. केसीका माग पूरा भइसकेकाले केसी अनशनकाे औचित्य सकिएको बताएको छ । बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गाेकुल बाँस्काेटाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भइसकेको अवस्थामा अनशन जारी राख्नुको कुनै औचित्य नरहने तर्क गरेका छन् ।
देउवा र गगनले भेटे डा. केसीलाई